Ubugcisa bePaint Art Fine Index
Iindlela zoPafa zoBugcisa bezobuGcisa
I-Painting Technique: Ipen kunye ne-Watercolor
Inkcazo ebonakalayo yePainting Techniques Ipen kunye ne-watercolor peyinti kwiphepha leetekethi. Umlinganiselo ophezulu. A5. Ifoto © Marion Boddy-Evans. Ilayisenisi ku-About.com, Inc.
I-Index yeZiboniso zoTyhila
Ukuba uke wazibuza ukuba "lo mculi wenza njani loo nto?" kwaye zifuna iimpendulo, ngoko uhlala kwindawo efanelekileyo. Ezi zithombe zobugcisa obuhlukahlukeneyo ziya kukunceda ukuba ufumene oko kwakusetyenziselwa ukudala imiphumo eyahlukeneyo kunye neendlela zokupenda, kunye nendlela yokufunda ukwenza oko ngokwakho.
Ezi ntsiba zazityinjwa zisebenzisa i-watercolor phezu kwamanzi angenanzi okanye engunaphakade.
Into ebaluleke kakhulu ukuyikhumbula xa usebenza kunye neepeni kunye ne-watercolor yile inki epenini kufuneka ingabi namanzi okanye iya kugubha xa uhlamba i-watercolor. Kubonakala kucacile, ndiyazi, kodwa ukuba unemibala ehlukeneyo ejikelezile, kulula ukuyithatha enye engenawo amanzi okanye engapheliyo. Ileta kwipeni iza kukuxelela, ngamanye amaxesha ngefayile encinane kunokuba igama.
Ngokuxhomekeke kwipeni kunye nephepha, unokufuneka ulinde umzuzu okanye ezimbini ukuze inkki ibe yomile ngaphambi kokuba ungeze i-watercolor. Uza kufunda kungekudala kuba inki iya kufakelwa ngokukhawuleza ukuba ayimile ngokupheleleyo (okanye ingenanzi). Ngelishwa, xa kwenzekile awukwazi ukuyihlaziya ukuze uqale kwakhona, uyifihle ngaphantsi kwepeyinti ethile, okanye wenze umzobo wepen-water. I-Gouache idibanisa kunye ne-watercolor okanye, ukuba unayo ityhubhu 'yamanzi amhlophe,' iya kuba yinto evulekileyo.
Ngaba unokuyipenda kuqala i-watercolor uze usebenzise ipeni phezulu? Ngokuqinisekileyo, nangona ulinde ukuba upende lume ukuze i-ink yangayiphumeli (isasazeka kwiimfomfuthi zamanzi zamaphepha). Ngokomntu, ndibona kulula ukwenza umsebenzi kunye neepeni kuqala njengoko kulula ukugcina umkhondo wendawo apho ndisemfanekisweni.
I-Painting Technique: I-Pen-Soluble Pen ne-Wet Brush
Inkcazo ebonakalayo yeendlela zokwenza upende Ukusebenzisa ibhrashi emanzi kunye neepeniti elunqunyulwa ngamanzi "uchithe" ipeni kwaye idale ithoni. Ifoto © 2011 Marion Boddy-Evans. Ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Lo mfanekiso wenziwe ngepende usebenzisa ipenki emnyama enqabileyo yamanzi, kunye nebhayisiki ngamanzi ahlambulukileyo.
Ukuba usebenzisa ipeni kunye ne-watercolor, ufuna ukuqiniseka ukuba usebenzisa ipeni ngenki engenawo amanzi njengoko ungafuni ukuba inkino iqhube kwaye isasaze. Kodwa ngomzobo we- monochrome , usebenzisa ipenitye yamanzi kunye nokuyijika ibe yinkinki echanekileyo ngokuya phezu kwayo nge-brush emanzi, kunokudala umphumo omhle.
Isiphumo ngumxube womgca kunye neetoni (ezimbini zezinto zobugcisa ). Ubungakanani umgca ogqitywa ngawo kuxhomekeke kumanzi amaninzi owenzayo (indlela emdaka ngayo i-brush), uhlambalaza ngaphaya komgca, kwaye uyayifaka njani iphepha. Itheyibhile eveliswayo iyahluka ukusuka ekukhanyeni kuya kumnyama. Ungalahleka umgca ngokupheleleyo, okanye uhlambe itoni encinane kuyo ngaphandle kokuguqula umgca womgca.
Umsebenzi omncinci, kwaye ngokukhawuleza uzakuziva. Umnyama, akunjalo, akuyiyo yodwa inketho. Amaplanga azinzileyo aphuma kuzo zonke iintlobo zembala.
I-Painting Technique: I-Water-Soluble Ink Pen (Uhlobo lweMbala)
I-Index yeZiboniso zoTyhila.
Umbala ohlukileyo kulo mdwebo wadalwa ukusuka kumntu othiwa "umnyama" ipeni!
Ukusebenza ngebhoshi emanzi kumzobo owenziwe ngepeni equkethe inki encibilikisiwe yamanzi ijika umgca uhlambe inki. Ngokuxhomekeke kumanzi amaninzi owasebenzisayo, ngaphezulu okanye ngaphantsi komgca uchitha.
Ingaba yeyiphi imbala yokuhlamba oyifumanayo incike kwiyoyinki; akusoloko ungalindela, ngokukodwa ngeepenki ezingabizi. (Ingxaki eyinokwenzeka ngokusebenzisa ipeni engabonakaliyo indlela i-inkino elula ngayo, kodwa ikulungele ukuzama, gcina iziphumo ziphuma kwelanga elithe ngqo.) Ngokomzekelo kwisithombe esandisebenzisa ipeni yomnyama ndathenga kwisitrato ngeli xesha, ipenki yokubhala ngesandla ebomnyama. Njengoko uyakubona, "yachithwa" ngemibala emibili, umphumo ondicinga ukuba uyasebenza kwaye uyabonakalisa.
Ngokuqinisekileyo ukuba i-ipilisi yamanzi ingabonakali njani, kuxhomekeke kwitshati, kodwa iqalo lokuqala libheke elinye elingathethi "ukungena kwamanzi", "ukumelana namanzi", "ukumelana namanzi xa usomile", okanye "isigxina. ". Ingakanani i-ink emile kumaphepha ingaba yinto; Amapenki angenawo amanzi aya kugubha xa usebenzise amanzi ngokukhawuleza.
I-Painting Technique: I-Over-Drawing Watercolor
Inkcazo ebonakalayo yeePayipi zoPawulo Ngasentla: Uluhlu lwama-watercolor lindele ukuma. Ngezantsi: I-Overdrawn enepencil ye-blue Derwent Graphitint. Ifoto © 2012 Marion Boddy-Evans. Ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Ukusebenza ipenciliti enemibala phezu kwepeyinti ye-watercolor yindlela efanelekileyo yokongeza iinkcukacha.
Umxholo wokwenza umzobo wepensile oya kuthi wongeze i-pearl watercolor yinto eqhelekileyo, kodwa ngandlela-thile ingcamango yokusebenza kunye "nomdwebo ophakathi" phezu komququzeleli wamanzi onomileyo uthathwa ngabanye ngokuthi "ukukopela". Nje ngokuba sele uqale ukusebenza ngepeyinti awukwazi ukubuyela emva. Akunjalo! Ukwahlula phakathi kokudweba nokudweba ngumbonakalo; yile mveliso oyilungayo ebalulekileyo.
Ipensela ecacileyo yinto efanelekileyo yokongeza iinkcukacha ezicacileyo, ngokudala umda ococekileyo. Abantu abaninzi bakuthola kulula ukulawula ulwalathiso nobubanzi bomgca ngeepensile kunokugqithisa. Ukugxotha isandla sakho ngentsimbi kukunyusa ukulawula.
Gcina intonga yepensile ebukhali kwaye ungabi buvila malunga nokuyeka ukululola. Ukuguqula kwiminwe yakho njengoko uyisebenzisa kuyasiza ukugcina loo ngongoma. Ukuba uyayithiya ngokukhawuleza, qalisa ngeepensele ezifanayo kunye neepencil ezifanayo.
Kulo mzekelo apha, ndisebenze phezulu kwipayipi ye-watercolor (emva kokuba isomile ngokugqibeleleyo!) Usebenzisa ipensile ebomvu-graphite. Ngokukodwa, i-indigo ukusuka kwi-Derwent yeGraphitint uhla (Ukuthenga ngokuthe ngqo), enokubakho ukukhanya okumnyama kuyo, eyahlukileyo kwipensile enemibala evamile. Kwakhona kuncibilika kwamanzi, ngoko kubalulekile ukuqinisekisa ukuba i-watercolor yayisomile! Njengoko uyakubona, inyanzele ukuba ndihluthe iimilo kwaye ndizise isithunzi. Isaziso, umzekelo, indlela eyatshintsha ngayo umlomo, wenza isithunzi kwi-earlobe nangaphantsi kwikhola, kwaye ichaza umda wekhati.
Kucacile ukuba akufanele usebenzise ipencilisi yamanzi kunye nale ndlela. Yiloo nto endimele ndiyinike yona, kodwa ikhethwe ngoluvo lokuba ndingayijika ukuba ndiyipende xa ndifuna.
I-Painting Technique: Ityuwa kunye ne-Watercolor
Inkcazo ebonakalayo yePainting Techniques Isalato kunye nopopu lwamanzi; i-clematis yenziwe ngeepensele zamanzi. Ifoto © 2010 Julz
Lo mdwebo wadalwa ngokusebenzisa ityuwa kwipeyinti yamanzi e-watercolor.
Xa usasaza ityuwa kumpompo wamanzi we-watercolor, ityuwa ibamba amanzi kwipeyinti, idonsa upende ngaphesheya kwiphepha ibe ngamaphethini angabonakaliyo. Sebenzisa ityuwa eliqhekezayo, kungekhona ityuwa, njengoko inkulu ityuwa ngakumbi iya kuyifumana. Xa ipende iyomile, gcoba ngenyameko ityuwa.
Zama ngeesilinganisi ezihlukeneyo zokumanya kwepeyinti yakho yamanzi kunye neyiphi ityuwa oyenayo de ube uziva ngayo. Ukumisa kwaye ityuwa ayikwazi ukucwina upende. Umnayile okanye ityuwa eninzi kunye nepeyinti yakho yonke iya kufakwa.
• Indlela yokusebenzisa ityuwa ukudala ii-Snowflakes kwi-Watercolor
I-Painting Technique: I-Coloring Colors
I-Index yeZiboniso zoTyhila. Ifoto © Marion Boddy-Evans. Ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Le "imibala enzima" yakhiwa ngokusebenzisa amaqabunga amaninzi.
Ukuba ukhangele umzobo "onzima imibala", apho imibala enobunzulu obunzulu kunye nokukhanya kwangaphakathi kubo, kunokuba ibonakale iqinile kwaye isicacile, ngoko ngokuqinisekileyo bayadalwa ngokugaya. Yilapho iziqendu ezininzi zombala zidwetshwe ngaphezu komnye kunokuba zibe yinto enye yepende.
Isihluthulelo sokuqhayisa ngokuphumelelayo kukuba ungapende uluhlu olutsha lwamaqabunga kuze kubekho uluhlu lwangoku lumile. Ngemibala ye-acrylic okanye i-watercolor, akudingeki ukuba ulinde ixesha elide ukuba oku kwenzeke, kodwa ngeepende zeoli uzakufuneka ube nesineke. Ukuba ulala phezu kwepeyinti emanzi, upende uya kudibanisa kwaye uya kuba nokubizwa ngokuba ngumxube ongokwenyama kunokuba udibaniso olubonakalayo .
• Indlela yokudweba iGlazes
Uludwe lwePainting: Ukuhamba
Esi siphumo senziwe ngokuvumela utyende oluqhekezayo ukuba lube phantsi kwaye, xa lumile, luhlanganiswe nge-glaze ebonakalayo.
Ukubandakanya ukungena kwimifanekiso, nokuba ngaba kwenzeka ngamabomu okanye ngengozi, kunokunika umphumo othakazelisayo kwaye ubonayo kumbukeli. Ukuba upende ngepeyinti epholileyo (umgca, u-runny) ukupenda kwinqanawa ebonakalayo, umzekelo xa usebenza kwi-easel kunokuba uphelele kwitheyibhile, ngoko ungasebenzisa amandla adonsela ukuba ungeze "ingozi evuyayo" ku peyinti. Ngokulayisha ipeyinti ephothiweyo kwibhayisiki kwaye uvumele amaninzi avele kwibhayisiki kwindawo enye (ngokusunduza ibhrashi ngokubhekiselele kwinqwelo kwaye ungayigudluli kunye), uya kufumana i-puddle encane yokupenda kwinqanawa. Ngepeyinti elaneleyo, amandla adonsela phansi aya kuwukhupha phantsi okanye aqhube.
Unokukunceda inkqubo ngokucoca ipende ngeeminwe yakho, nangokubetha kwipuphu yokupenda ukuqala ukuhamba. (Phuma kwisikhokelo ofuna ukusila.) Ngokuqhaqhaqhaqha (ezininzi ngepayipi eqhubayo) ungatshintsha i-tovas ukuze usebenzise apho uhamba khona.
Isithomboniso sibonisa iinkcukacha ezivela kumzobo wam wembiza ngokuthi iMvula / Umlilo, eyenziwe nge-acrylics. Xa umgca wokuqala obomvu wawungawomile, ndambatha ipende yelenjini echanekileyo kwaye ndawuvumela ukuba iwele. Ukuba ukhangele phezulu, ungabona apho ndibeka khona ibrashi yam, ndilayishwa kwakhona ngopende ngexesha ngalinye, ngokulandelana. Njengoko upende wehla, luxutywe kunye nepeyinti ebomvu ebomvu. Oku, kunye nocingo obomvu obomvu wongezwa xa yonke into eyomile, kutheni ukuqhuma kuninzi kwelaseta phezulu phezulu.
Ukuba usebenza nepeyinti yeoli, phinda upende ngeoli okanye imimoya kuxhomekeke apho uhlala khona kumanqatha ngaphezu kobugcisa bakho. Ukuba usebenzisa ii-acrylics, cinga ngokusebenzisa elinye i-glazing medium njengoko ungafuni ukuthoba umpopu kakhulu . Ngenye indlela, sebenzisa i-acrylics ekhoyo .
Nge-watercolor, akunandaba nokuba unamanzi amaninzi okongeza ukupenda. Unokukunceda ukukhokela ulwalathiso lwepayipi ngokusebenzisa isalathisi semvu, uhlambulukile obala kumzobo wokuqala.
I-Index yeZibonelelo zeTeknoloji zobuGcisa. Ifoto © 2011 Marion Boddy-Evans. Ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Unokuthatha ukudweba ngokuqhubela phambili ngokusebenzisa izikhalazo ezikhuthaza ukupenda ukusabalalisa nokuhamba. Usebenzisa ubukhulu bokutsala ipeyinti, ukuguqula nokuguqula i-tovas yakho ukutshintsha indlela.
Isithombiso sibonisa ezimbini iiselwandle ezandibonisa ngazo iipayili, apho ndajikezela khona iigrawu ezinkulu ezingama-90 ukuvumela ukuba upende lukhishwe ngamandla. Ukwenza amanqaku okuba iziphumo zihluke kwizinto ezidalwe ngentshonkco: ukhululeke, uninzi oluthile, olungaphezulu kwezinto eziphilayo. Ipeyinti emanzi ehambayo ijoliswe ukuba ibe ngumda wolwandle, ukuqhuma emanzini angatye kufuphi nxweme. Xa sele somile, ndiyakwazi ukuphinda inqubo ngeetoni ezahlukeneyo. Emva koko ndiza kuchitha ezinye ezimhlophe zibe ziphovu kwi-shoreline.
Ukupenda kwe-acrylic, abavelisi abahlukahlukeneyo bakhiqiza ukuphuculiswa kokuhamba, okuye konke kunciphisa i-viscosity yepende ukuze isasazeke ngokulula. Akuyiyo inzululwazi inkcazelo, kodwa ndicinga ngomjikelezo ophakathi ukuyenza ipeyinti ibe yinkqantosi, njengendlela yokutshixa kunye nelayila phantsi kwinqanawa eyahlukileyo ukupenda ngokucoca ngamanzi yodwa. Ipeyinti yeoli, ukongeza i-solvent okanye i-alkyd medium flow iya kukhuthaza ukupenda ukusabalalisa ukusebenza.
Ndidibanisa ukujikeleza okuphakathi kwaye upende kwiparelette yam, ke uyifake ngebhashi kumdwebo wam. Okanye ndilahla umgca omncinci ojikelezayo ngaphakathi kwinqanawa ukuya kwipende ekhoyo. Ngalunye uvelisa uhlobo oluthile lwamanqaku; Uvavanyo luya kukufundisa oko ungayifumana. Khumbula, ukuba awuyithandi umphumo, unokuyicima okanye uyigqithise. Akuyintlekele, nje kuphela inyathelo kwinkqubo yokudala.
• Jonga kwakhona: Amanqaku okwenza uMarko: Ukutyhiza amanzi kwiPaint Acrylic
I-Painting Technique: Iintlu zePaint, ezingabonakaliyo
Inkcazo ebonakalayo yezoPawulo zePainting Iiblues ezine ezihlukeneyo zasetyenziselwa ulwandle kule mzobo. "Camus Mor 5" nguMarion Boddy-Evans. Size 30x40cm. I-Acrylic kwinqanawa. © 2011 Marion Boddy-Evans
Ulwandle kulo mzobo lwakhiwa ngokubeka iiblues ezahlukeneyo ngaphaya komnye, ngokudibanisa okuncinci.
Ulwandle luvame ukuba lunomthi kubo, imibala eguqukayo kunye neetoni njengoko sijonge kuyo. Ukuzama ukuthatha le nto, ndisebenzisa i-blues ne-mhlophe ehlukeneyo, kwiindawo eziphukileyo ukuze kuboniswe nganye, kunokuba udwebe ulwandle libe ngumbala ohambelanayo, odibeneyo.
Ubumnyama obumnyama yiPrussia eluhlaza okwesibhakabhaka, enye yayo yayingu-paint art acrylic kunye ne-acrylic ink. Umbala ohlaza okwesibhakabhaka unombala ohlaza okwesibhakabhaka (ipeyinti), kunye ne-cobalt elula kunazo zonke (ipeyinti). Kukho kwakhona i-acrylic ye-acrylic inkki. Ngaphezu kwe-titanium emhlophe kwaye, esibhakabhakeni nasemhlabeni, ipeyinti encinci ye-umber.
Ndasebenzisa ezinye zepeyinti ngqo kwi-tube, ndincincile ngamanzi, nditshisa kwaye ndihamba kakuhle. Ukongeza umhlophe ukwenza uhlaza okwesibhakabhaka opaque oluthe xaxa, longeza kwimimandla embala.
I-blues iboniswe ngaphaya komnye, ngamanye amaxesha ngokubethelwa kwexesha elide, ngamanye amaxesha elifutshane. Ulwalathiso lokwenza amanqaku lubalulekile, kwaye lufanele luqhagamshelane nesihloko. Apha ndisebenze ngokulandelelana, emva kokugqithisa, nokutshintshana okufutshane kunxweme njengoko amagagasi aya kuguqula ngokwemvelo.
Ndiye ndaziphepha ukudibanisa imibala ngokupheleleyo (isilingo xa upenda umzobo omanzi ). Umbala ngamnye makaboniswe ngokwawo kwaye uvumele iibitshi zize zijonge kwiindawo. Kunoko ukudibanisa kakhulu kuncinane kakhulu. Ukuba ugqiba ngomgca onzima kwindawo ethile ekhuphayo, unokuyithambisa ngokubeka encinane enye yebhakabhaka ngaphezulu kwayo, uze udibanise imida yalo.
Uluhlu lwesimboli kwinqanaba, yongeza uze ufihle. Ungalindelanga ukuba kulungile okokuqala, musa ukususa into "engalunganga" kodwa usebenze kuyo. Yonke ineza ubunzulu kwimifanekiso yokugqibela. Ndiyakuthi ndisebenze kwimifanekiso njengolu suku kwiintsuku eziliqela, enika ixesha lokupenda ukutyumba ngokupheleleyo kwaye ndicinga ngento endiyenzile. Khumbula ukubuyela emva rhoqo njengoko umzobo ubonakala uhlukile kumgama kwaye uvale.
I-Painting Technique: I-Colending Colors
Inkcazo ebonakalayo yeTeing Techniques Tech Art Painting Techniques Blending Colors. Ifoto © Marion Boddy-Evans. Ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Utshintshi oluninzi lwemibala kule mzobo lwenziwe ngokudibanisa upende ngelixa limanzi.
Ukuba uqhathanisa i-orange enzulu kwilanga ukuya phezulu kwinduli kule mzobo, uya kubona ukuba intaba inomphetho onzima kakhulu, ngelixa ilanga linomphetho ongezantsi oya kwi-orange nephuzi. Oku kwenziwa ngokudibanisa imibala xa basesemanzi.
Ukuba udweba ngeoli okanye i-pastels, uninzi ixesha lokuxuba. Ukuba usebenza ne-acrylics okanye i-watercolor, kufuneka ukhawuleze. Ukudibanisa, ubeka imibala ecaleni komnye nomnye, uze uthathe ibhulashi ecocekileyo kwaye uhambe ngokulula apho imibala emibili idibana khona. Awufuni ukongeza upende olongezelelweyo, kwaye awunayo nayiphi na imibala eyeka ngokukhawuleza.
Ukufumana inkcazelo engakumbi, jonga le Demo-nyathelo-I-Step-Step kwi-Blending Colors .
Funda kwakhona: Ukudweba i-Series ebizwa ngokuba yi-Heat
I-Painting Technique: I-Iridescent Oil Pastels njengePraint Background
Inkcazo ebonakalayo yezoPawulo zePainting Imvelaphi yegolide yale linoprint yadalwa ngokusebenzisa i-pastel yeoli edibeneyo, edibeneyo. Ifoto © 2011 Marion Boddy-Evans. Ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Imvelaphi yeli linoprint yenziwe ngegolide, i-pastel yamafutha e-iridescent.
Enye yeengxaki zepeyinti zegolide ziyakwazi ukufumana i-finish. Ngoko ke le linoprint , ndasebenzisa i-pastel yeoli edibeneyo apho ndidibanisa khona ngomnwe. Enye inzuzo kukuba andizange ndilinde ukuba yome ngaphambi kokushicilela i-linocut phezu kwayo.
Qaphela: Ndasebenzisa inki yokunyusa i-oil-based ukuze ndiprinte kwi-pastel yeoli, kungekhona inki yamanzi. I-pastel iya kutshintsha kwaye ixubhe kancane xa uyayichukumisa, ngoko umzobo uzakufuneka ukhuselwe phantsi kweglasi. Ukusebenzisa le khishini kwikhadi elilodwa-off, ndingasebenzisa enye yezo ifomathi ezifakwe apho kukho ukuqhubela phambili phezulu komfanekiso. Fumana ukukhanya ngokufanelekileyo, kunye neefoto ze-pastel ezisezantsi, ngokunjalo ukwenza iingubo ezivela kwimifanekiso ngokuqinisekileyo kukho ukhetho.
• Ukuhlaziywa kwam kwi-Sennelier Oil Pastels
Iindlela zobuGcisa zokuSasaza
Uluhlu lweZiboniso zoPhando lwezobugcisa Ukusabalalisa kunokwenziwa ngombala omnye, okanye ngamanani amaninzi ukwakha imibala yombala njengoko kuboniswe kule mizekelo. Ifoto © 2011 Marion Boddy-Evans. Ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Lesi sithombe sibonisa iinkcukacha ezimbini ezisuka kwi-seascape, apho ulwandle lwalube ludwetshwe ngokusebenzisa ubugcisa bokusasaza kwi- sgraffito .
Ngexesha elilandelayo utshintshe i-toothbrush yakho, ungayiphondi elidala kodwa uyibeke kwibhokisi lakho lobugcisa. Isixhobo esipheleleyo sokusasaza . Udibanisa i-brush kwi-paintny okanye ipeyinti ephothiweyo, phawula kwipayipi yakho, uze ugijime ngomunwe (okanye i-palette knife, isibambo sokuxubha, okanye iqela lekhadi) kunye ne-bristles. Khumbula ukwenza oku kuwe ukuze upende uphelele kude nawe.
Oko oku kuveliswa kukuveliswa kwamaconsi amancinci. Ukuba uthanda ukulawula ngokupheleleyo, okanye ungathandi izinto ukuze uhlambele, oku mhlawumbi akuyiyo yindlela oyakuzonwabisa ukuyisebenzisa. Ngelixa unako ukulawula okanye ukukhokela apho upende uya kuhamba ngandlela-thile ngohlobo, luthanda ukuphalaza uze ufike kwiindawo ongazange uzilindele.
Ubungakanani bamaconsi buxhomekeka kwindlela udweba ngayo, ukhulu kangakanani kwi-brush of teeth, kunye nendlela uluhluza ngayo. Akumele usebenzise ibrashi yamazinyo ukusabalalisa, nayiphi na ibhulashi enesibindi esebenzayo. Zama okokuqala kwiphepha lakho kwiphetshana lesikripthi okanye iphepha lephepha. Okanye ukuba uyayenza kwimpulelo eyomile, unokusula upende uze uzame kwakhona. (Nangona usebenzisa i-acrylics, khawuleza njengoko upende uzomisa ngokukhawuleza.)
Ukuyeka ukupenda ukupenda kwindawo ethile, uyisitye. Ngendlela elula kakhulu ukubamba okanye ukupakisha isahluko sephepha okanye iingubo, ehlanganisa indawo ongayifuni ukusasaza.
Iindlela zobuGcisa i-Soluble Graphite
I-Index yeZibonelelo zezobugcisa zobuGcisa I-graphite yamanzi (i-ipilisi) yamaphepha e-A2. Ifoto © 2011 Marion Boddy-Evans. Ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Olu phofu lwazi luyilwe nge-graphite yamanzi. Imigca ibanjwe kuqala, kwaye ibhulobho yamanzi isetyenziselwa ukuguqula enye yegraphite ibe yipende. Ndaphakamisa umbala ngokucacileyo kwipencilisi kunye ne-waterbrush, kwaye ndatyelela ipensela kwiindawo ezimanzi ephasini. Le ndlela ifana nokusebenzisa ipensela yamanzi , ngaphandle kokuba usebenza kwiitoni ezimnyama kuphela.
Xa ungasebenzisa ipenciliti yamanzi ene-graphite eyomileyo ephepheni elomileyo, liya kuvelisa iziphumo ezifanayo njengepensile evamile. Yiya phezu kwayo ngebhayisiki kunye namanzi, i-graphite iyajika ibe yipende ebonakalayo ebomvu, njengokuhlamba i-watercolor. Ukusebenza nayo kwiphepha elimanzi kuvelisa umgca othobekileyo, obanzi, olwabalalisa emacaleni.
Iipencilisi zamanzi ze-graphite ezinqumlezileyo zamanzi ziza kuba ngamazinga ahlukeneyo obunzima bepensile , kwaye njengepensele enomthi ojikelezileyo okanye iintonga ze-graphite ezingenanto. Ingqungquthela engenazinkuni inomsebenzi ongenakuze ufune ukuyeka ukuwulola. Uvele uqhekeza isahluko se-wrapper ukuze ukhankanye ngaphezulu kwetrafite stick. Unako ukulolonga intonga yegraphite kwindawo ethile kunye nobukhali obufana neepensile eziqhelekileyo, kodwa kunokuba lula ukukhawuleza ngokukhawuleza ukuba uphendule kwiphepha elithile.
• Indlela yoPenda ngePlascolor ipensela
• Amapensele kunye neekrayoni eziphambili zeManzi
Iindlela zobuGcisa: iGouache kunye nePolisi yePolisi
I-Index yeZiboniso zoPhando lwezobugcisa Lo mdwebo weendaba odibeneyo udibanisa i-gouache kunye neepensile enemibala. Ifoto © 2011 Marion Boddy-Evans. Ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Ukuba u- opaque , umgca wepeyinti ye- gouache uyakufihla nayiphi na ipencilisi amanqaku phantsi kwepeyinti engaphezulu kune-watercolor. Kodwa unokusebenza phezulu phezulu nge pencil (igraphite okanye imbala) kunye nokudweba kwipende epholileyo njengokuba ndiyenzile kulo mzobo wokudweba.
Njengoko unokubona kwiinkcukacha ezivela kwipayipi, amanqaku adalwe ipensele enombala obomvu kwipeyinti ye-gouache iyahluka. Kwezinye iindawo zitshintshe ipeyinti ngaphandle kodwa zingashiywanga naziphi na iimpawu zepensile kwiphepha. Kwezinye iindawo uhambisa ipende kwaye ushiye umgca omdaka. (Zombini ezo zinto zingabizwa ngokuba yi- sgraffito .) Xa ipende yome, ipensela enemibala ishiye umgca phezulu kwipende. Ngaloo ndlela ipensela enye inokuvelisa ukwenziwa kweempawu zepeyinti kunye nopende.
Ndiyibona imbobo enombala obomvu akuwona umbala ochaphazelekayo kwimpilo enhle kwaye kubonakala ngathi kuyinqaba yokukhetha umzobo. Kodwa ndasebenzisa upende obusalayo ekupheleni kweseshoni yokudweba ubomi, kwaye akazange afune ukuthatha upende olutsha. Ubomvu bubungcono kunokuba luhlaza okomhlaza ongabonayo ukukhangela kumahlombe. Ngokuqinisekileyo i-pallor engafanelekanga! Ndalinga ukugxila kwitheyuni kunokuba i- hue , kwaye wasebenzisa ipensela ukuze wonge enye inkcazo kwifom yesibalo.
Indlela yokudweba i-Wall Wall
Umbala wePalettes omncinci wePlein Air Painting
Iingcebiso zokuPalela i-Self-Portrait
Igalari yeSithombe seMpawu zoPafa zoBuso
10 Iincwadi Ezinkulu Zokufunda Indlela YokuPenda
Indlela yokudweba iinjongo zamanzi ezinyanisekileyo
Kutheni ukuba i-Y-DNA yoVukaniso beMadoda yoTywala ngegama elihlukile?
Ikusasa eliqinisekileyo likaEta Carinae
Iingxelo - uLazaro, ongabonakaliyo Uluhlu kunye nala maphepha
I-Libra neSagittarius Uthando olufanelekileyo
Oko Kufuneka Ukwazi Ngaphambi Kokukhetha Igama legama leSih
Imfazwe Yomlomo: I-Convair B-36 Uxolo
Iiplani eziPhambili eziPhambili zePhulo
Indlela Yokucela Izikhokelo kwiItaliyane
Indlela yokubhala eyakho Manga